DVD on Wii - Olee ka Play DVD on Wii
DVD Creator Maka iche iche Devices
1. Ọkụ Android Video ka DVD
2. tọghata camcorder Video ka DVD
3. tọghata Handycam Video ka DVD
5. tọghata 8mm ka DVD
6. Ọkụ Canon Video ka DVD
8. iPlayer ka DVD
9. tọghata Vuze Video ka DVD
11. Ọkụ Nikon Video ka DVD
13. Ọkụ Sony Bloggie ka DVD
14. Ọkụ Kodak Video ka DVD
> Resource> DVD> Ị Pụrụ Play DVD on Wii - Ee, ị nwere ike
Ị Pụrụ Play DVD on Wii - Ee, ị nwere ike
Niile ị chọrọ bụ ihe SD kaadị na ndị na-esonụ free download.
Chọrọ ile DVD na gị Wii, ma achọghị agbali ụfọdụ mgbagwoju anya MacGyver-ụdị hack na messes na gị Wii si ikike idi? Gbalịa mee ihe ndị Wondershare Video Ntụgharị for free. Ọ na-agụnye ihe kachasị Wii video format-ahapụ gị tọghata DVD na lossless àgwà nri gị Wii-dakọtara SD kaadị. A bụ ihe a free ikpe idetuo na atọ obere nzọụkwụ gị mkpa n'okpuru:
Mgbe a ngwa ngwa echichi, ihe niile ị chọrọ ẹkedori ọ bụ a abụọ-pịa na desktọọpụ shortcut.
Nzọụkwụ 1: tọghata DVD faịlụ maka Wii njikwa
Nzọụkwụ 2: Họrọ Wii video format na pịa tọghata
Nzọụkwụ 3: Detuo faịlụ (s) gị SD Kaadị & Play ya!
Ajụjụ banyere SD kaadị na Wii?
Na-etinye na a DVD, wee pịa Ibu Ibu DVD, dị ka na foto n'okpuru. Na-ebukwasịkwa ọzọ DVD ma ọ dị mkpa; DVD ka Wii Ntụgharị-ahapụ gị tọghata tọn faịlụ otu oge site na ogbe akakabarede.
Mgbe niile gị faịlụ na-kwajuru, họrọ ha niile site na ịpị Ctrl + A (ma ọ bụ Wụk + A na Mac), wee pịa mmepụta Format 's adaala menu ka na foto n'okpuru ma họrọ Ngwaọrụ> Game> Wii. Mgbe ahụ dị nnọọ pịa nnukwu-acha anụnụ anụnụ tọghata button na-aga-eme ka a Sanwichi ọ bụ ihe. The Video Converter Ultimate-ewe ọtụtụ minit iji tọghata a mma-ogologo DVD n'ihi na ọ na-atọghata na efu àgwà ọnwụ. Mgbe ị na-abịa azụ, ị ga-ahụ gị na fim gbanwee site a DVD ka a Wii-dakọtara video!
Mgbe akakabarede, ị pụrụ nanị idetuo ọhụrụ gị Wii-dakọtara video faịlụ (s) ogologo jidesie gị SD kaadị. Mgbe faịlụ na-okokụre Iṅomi, dị nnọọ wepụ SD kaadị na kọmputa gị, arapara ya na console,-na na na-esi njikere na-enwe gị DVD on Wii!
Ma eleghị anya, ị na-enwe nsogbu na-akpọ converted videos na gị SD kaadị? Ị na-amaghị nke ụdị nke SD Kaadị na ị ga-mkpa. Ọ bụla, ndị a njikọ kwesịrị inyere ikpochapụ ya maka unu.
Ebe a bụ ụfọdụ nke Nintendo si SD Kaadị Resources:
Ndepụta nke Ò Kwekọrọ n'Ozizi SD kaadị - Ị ga-enwe ike ịchọta nkọwa na dị iche iche SD kaadị nakwa dị ka ndị nduzi na-esi Ibu Ibu na nyefe ọdịnaya si SD kaadị.
Gị Iji Wii si SD Kaadị NchNhr - Bulie ole na ole njem na otú ị pụrụ iṅomi ma ọ bụ chekwaa data na SD kaadị.
Wii SD Kaadị Nchọpụta nsogbu - Chọta enyemaka na nchọpụta nsogbu; ihe atụ na njehie ozi, njikwa, usoro na ihe ndị ọzọ.
Olee otú Play DVD na Windows 10
Otú na-ekiri DVD Movies on Android
Apụghị Mbubata mp4 na DVD kpatụ aka gaa? Tụlee a DVD Creator for Mac na Windows
Olee otú ka Wepụ Cinavia na DVDFab
3 egwu Atụmatụ maka iDVD Gburugburu
Olee otú iji tọghata MKV ka ISO (Windows 10 gụnyere)